ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ Crypto ကိုစပီးတော့ စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ YouTube မှာ crypto ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ Crypto trading ဆိုတာဘာလဲအကုန်လျောက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ့ထဲကမှ mine လုပ်တာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ အိမ်မှာက laptop ၂ လုံးလောက်အပိုရှိနေတာနဲ့ အဲ့ကောင်တွေနဲ့စမ်းဖြစ်တယ်။
အလွယ်ကူဆုံးကတော့ https://unmineable.com ။ အဲ့ကောင်ကို စစမ်းတယ်။ အားတက်သရော setup တွေဘာတွေသေချာလုပ်ပီးတော့ ဟုတ်ပီပေါ့။ တကယ့်တကယ်လည်း run လိုက်ရော တလလုံး run ထားမှ $2 လောက်ရမယ်တဲ့။ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေ။ ကိုယ့် laptop က spec ကအတော်နိမ့်နေတာကိုး။ Graphic Card ကောင်းကောင်းနှင့် mine ရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်။ ဒါတောင်တနှစ်လောက်နေမှအရင်းရမှာ။ စျေးအတက်အကျနှင့် သိမ်းထားပီးမှရောင်းရင်တော့ပိုရပီး…
မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိ Crypto ကို စိတ်ဝင်စားပီး Crypto ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကနေ Crypto ဘယ်လိုဝယ်မလဲဆိုတာကိုရေးသားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ Crypto ဝယ်မယ်ဆိုရင် Binance ကအတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ တကယ်လို့အကောင့်မရှိသေးရင် Binance ကိုသွားပီးတော့ register အရင်ဆုံးလုပ်ပါ။ ဒီ Link ကိုသုံးပီး register လုပ်ရင် ကျွန်တော့်အတွက် refferal ရပါတယ်။
Unstable WebSocket connection dropping at certain concurrent request
There are quitealot of blogs and screencasts about “How to set up Laravel Websockets”. Those work great. But, when I try to use the Laravel Websockets on production. There are quiteafew things to notice.
By checking official documentation’s deployment guide. We need to
Increasing the maximum…
Originally posted — https://setkyar.com/setup-server-monitoring-with-prometheus-node-exporter-and-grafana-on-ec2/
Today, I gonna write about how to set up server monitoring with Prometheus node exporter. Just doing the setup process is quite easy and there are tons of tutorials out there on the internet. So I am going to write about why I plan to use…
Originally posted — https://setkyar.com/laravels-notification-locale-issue
I was checking the locale issue on my own application and found out this interesting issue. I am using Laravel’s user-preferred locales for the notification translation. But, it keeps going with our application's default language. It does not use the user’s preferred locales.
Originally posted — https://setkyar.com/aws-ec2-instances-start-stop-automation-with-cloudwatch-and-system-manager-automation
Our development team got bigger and we got more and more EC2 instances for each dev team. But, they are not in use after office hours. In order to save costs, we makeaplan to stop and start atacertain time.
I’ll be publishing new articles at setkyar.com. I feel Medium is too much control over my posts.
You can subscribe to my new blog via RSS feed, email, or Twitter.
အထွေအထူးတော့မဟုတ်ပါဘူး Setup file လေး download ဆွဲ… ဟိုနှိပ်ဒီနှိပ်ပါဘဲ…။ ဒါပေမယ့် setup လုပ်တိုင်း setup file လိုက်ရှာလိုက်… keyboard switch ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလိုက်ရှာလိုက်နဲ့ နည်းနည်းအာရုံနောက်လာလို့ စာရေးထားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးရေးထားလိုက်တာပါ။
Myanmar Unicode ကို Apple Computer မှာသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က Apple4MM Unicode ဆိုတဲ့ Myanmar Unicode Keyboard ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ Apple4MM Zip Setup file ကို ဒီမှာ download လုပ်ပါ။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း File တွေကိုရွှေ့လိုက်ပါ…
Download လုပ် zip ဖြေပြီး Keyboard Layouts ထဲကို files တွေရွှေ့လိုက်ပါ
ပြီးသွားရင် Setting ထဲက keyboard -> Input source ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်ဘက်ခြမ်းကအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ… English ရဲ့အောက်က Others ဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့ Apple4MM Unicode ကို choose လုပ်ပြီး add လိုက်ပါ။ ဒါဆို menu bar မှာ US ရယ် Apple4MM Unicode ဆိုတဲ့ keyboard layout တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ English က Myanmr က English ကို switch လုပ်မယ်ဆိုရင် Shift + Control + Space နှင့်ပြောင်းနိုင်ပါပြီ။
Software Engineer at Carro.sg . Writer. Maker of 👨‍💻 https://www.myanmardevjobs.com , https://myanpx.com and http://ponekyimel.com Wanna be DataScience